पदवी, तक्मा, रबाफ, रकम | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
पदवी, तक्मा, रबाफ, रकम
पदवीहरुमा सर्वत्र भागबण्डाको दावानल व्याप्त छ । त्यसका लागि कुनै असाधारण योग्यता क्षमता नभए पनि फरक पर्दैन । तक्मा पाउन कुनै अलौकिक काम गर्न पर्दैन । पंचायत कालमा हुने तक्मा वितरणबाट धारकहरुका लागि भार र लज्जाको विषय हुनेछ भनि पटक पटक लेख प्रकाशित गर्ने गराउने भित्र स्वयं सहभागी थिए । अहिले त पंचायतपछि बहुदल हुदै संघात्मक गणतन्त्र सम्म आइ पुग्दा ठूलै क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको हुनु पर्नेमा गो.द.बा.लाई समेत मात पार्ने गरी प्रकाशजी समेत तक्मा पाउने भित्र परेको सुन्दा गदगद भए । सोमलाल सुवेदी भन्ने देश कै बेइज्जत गर्ने
कर्मचारीको त शरीर भरी तक्मा नअटाउने
भएछन् । लोकदर्शन रेग्मि पनि के कम सबका आफ्नै हात जगन्नाथ, राष्ट्रपतिका लागि १६
करोडको गाडी रे, रवाफ देखाउन पदवी मात्र आवश्यक देखिदैन आयाराम गयाराम भए पुग्छ । मुसा प्रवृत्तिका ज्वलन्त प्रतिकलाई आफ्नो औकात प्रष्ट भएकै होला । लोकप्रिय कहलिएका नेताजीको घरमा नै सेंध लागि उल्टो गिन्ति सुरु भएपछि ‘पुनर्मुसिको भब’ हुन यो गोर्खे मुलुकमा कति समय लाग्ला र ? राणाहरुले देश लुटे भन्ने गरिन्छ, सत्य पनि हो तर उनका लगानीबाट बनेका दरबार, महलहरु त सार्वजनिक उपयोगमा आएकै छन् । कुनै स्वीस बैंक वा पनामा पेपर्समा नाम आएको सुनिएन । फेरी त्यस्तो लुट खसोट सीमित वर्गमा थियो । लाख करोडमा हुने गर्दथ्यो । अब त करोड पनि सानो भइ सक्यो । एउटा सहसचिव चुडामणि शर्मा संग अख्तियारले तत्काल प्रारम्भिक चरणमा ३ अरब धरौटी माग गर्दै अझ हजारौं फायल हेर्न बाँकी नै रहेको संचार माध्यमहरुमा आयो । यसको अर्थ अरबले पनि नभ्याउने जस्तो छ खरबमा जाने पुरा संभावना छ । निर्लज्ज रामशरण महतले उनि प्रति अख्तियारले गैर कानूनी काम ग¥यो भनि बचाव गरेको सुन्दा र त्यस्ता बोकालाई अख्तियारले बलिका लागि नलगेको हुनाले दुःख लागेको छ । तिनै
रामशरण महत अर्थमन्त्री हुदा चुडामणि जस्ता एजेण्टहरुको उत्पादन भयो । पूर्व आइ.जी.पी.हरु जेल जाने तिनका सुत्रधार पदवी खानमा नै छन् । तत्समयका गृहमन्त्री गृहसचिव कसरी उन्मुक्त भए आश्चर्यको विषय छ ।
एनसेल प्रकरणमा पनि पचासौं अरबको भ्रष्टाचार स्पष्ट भएको छ । त्यसका सुत्रधार को हुन् यो पनि लगभग खुल्दै आएको छ । लोकमानले
धेरै गोप्य सूचना राखेको आशंका संचार माध्यमहरुबाट खुल्दै आएको हो । उनले समानान्तर सत्ता चलाए त्यो खुबी थियो र गर्न सके तर यो प्रकरण त्यत्तिकै पुरा हुन सक्तैन । उनलाई के का लागि पूर्ववर्ति
रेकर्ड विवादास्पद हुदाहुदै किन नियुक्त गरियो ? उनले विदेशमा रहेका बखत पोल खोल्ने परोक्ष धम्की गर्ना साथ महाभियोग प्रस्ताव ल्याइयो त्यो जीवित छदै सर्वाेच्च अदालतले नियुक्ति वैधतामा नै प्रश्न गर्न मिल्थ्यो मिल्दैनथ्यो ? त्यसमा पनि मनोनयन प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरुका मान पदवी रवाफ जीवित छन् वा हराए जे गर्दा पनि हुने यो देशमा हामी आम सर्वसाधारण रैति पनि छौ कि छैनौं त्यसको समीक्षा गर्न पर्ने समय आए जस्तै छ ।
सामान्य कर्मचारी पनि देशलाई यसरी लुट्न समर्थ रहन्छ भने ऐन नियम कसका लागि हुन् ? जनता मुर्दा जस्तै भएका त होइनौं । जसले बाहुबल जति गरेपनि छुट छ त्यसका लागि ऐन नियम सब गौण छन् । सुशिला कार्की जस्ता उद्दण्ड अहङ्कारी र स्वेच्छाचारीलाई महिमा मण्डित गर्ने काम हुन्छ । उनि कहाँ उनकै शब्दमा लेखक भन्ने नचिनेको कांग्रेसी आएर न्यायाधीश नियुक्तिको पर्चा दियो जसको वास्ता गरेन भनि काचो झुठ
बोलिन् । तिनै महापुरुष लेखक समेतले बुझाएका नाम वाला नै त उच्च अदालतका न्यायाधीश बने । न्यायिक जगतले देखेको त्यही हो जुन रामप्रसाद भन्ने भ्रष्टलाई उनले महिमा मण्डित गरिन्
अकारण हाम्रा शहीद रण बहादुर बमलाई लाञ्छित गर्ने काम गरे तेज बहादुर भन्ने न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरे त्यस सर्वाेच्चले स–सम्मान ७ वर्ष पछि निर्दाेष भनेर पुनरबहाली ग¥यो । उमेर सम्बन्धी सुशिला कै एकलौटी अन्याय पूर्ण निर्णयलाई सर्वाेच्चले बदर गरी दिएको छ । भ्रष्टहरुलाई महिमा मण्डित गर्ने यो देशले धुर्मुस सुन्तली वा कुलमान घिसिङहरुलाई चिन्दैन । कसैलाई नअटाउने गरी आफ्नै हात जगन्नाथ पार्न दिनु र हुनुपर्ने नभए पछि धुन्धुकारीहरुका दिन गिन्ति सुरु भएपछि निश्चित रुपमा ढिलो चाडो परिणाम नआई कहाँ बाँकी रहला ? प्रकृतिको नियम त यही हो ।
पदवी भएर मात्र रवाफ नहुने व्यहोरा नसिबले पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले गरेका हास्यास्पद क्रियाकलापबाट काउण्टडाउन
प्रारम्भ भए जस्तो छ । एक एक गरी ब्याँसाहरुका असली आकृति देखिन थालेका छन् । ‘कोढमा खाज’ भने झैं केही तराईका अंगिकृतहरुका देशद्रोही क्रियाकलापहरुले समयको गति नजिक ल्याउला कि ? सर्वाेच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थालाई धराशायी पार्ने गरी नानाथरि मुद्दा पर्ने गरेका छन् । चुडामणि शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट परेको छ रे, आम सर्वसाधारण हेरी रहेको बोध रहोस् । कानून पढ्ने र जान्ने धेरै छन् । विदेश शैर गर्दै
राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने कर्मचारीहरुका अरबौंको लुटमा के कारवाही हुन्छ ? यी तमाम विषय देशलाई कलंकित पार्ने इतिहास बन्ने निश्चित छ ।
← श्रावणको सोमबारमा शिव पूजा किन ?
नेपालको भुमि सहित राणा शासनलाई सति चलान →